(Thailand မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ထိုင်းနိုင်ငံ သည် အရှေ့တောင်အာရှ တွင်ပါဝင်ပြီး ရုံးသုံးအမည်အားဖြင့် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံ (အင်္ဂလိပ်: Kingdom of Thailand ) ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအား ယခင်က သယာမ် (အင်္ဂလိပ်: Siam ဆီယမ်) ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ် အလယ်ပိုင်း အရှေ့တောင်အာရှ ကုန်းမကြီးတွင် တည်ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် လာအိုနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကပ္ပလီပင်လယ် နှင့် တောင်ဘက်စွန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တို့ တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေပိုင်နက် အနေနှင့် အရှေ့တောင်ဘက် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် လည်းကောင်း၊ အနောက်တောင်ဘက် ကပ္ပလီပင်လယ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့နှင့် လည်းကောင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: ဖလင်း ချတ် (Phleng Chat)
ထိုင်း (၇၅%)၊ တရုတ် မွန်(၁၄%)၊ အခြားလူမျိုး (၁၁%)
ဗုဒ္ဓ (၉၅%)၊ အစ္စလာမ် (၄.၆%)၊ ခရစ်ယာန် (၀.၇၅%)
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ နှင့် အ​ခြေခံဥပ​ဒေအညီ ဘုရင်အုပ်ချုပ်မှု
• စုခို ထိုင်းတိုင်းပြည်
• အယုဒ္ဓယ တိုင်းပြည်
၆ ဧပြီ ၁၇၈၂
• အ​ခြေခံဥ​ပ​ဒေ​အညီ ဘုရင်အုပ်ချုပ်မှု
၂၄ ဇွန် ၁၉၃၂
၅၁၃,၁၁၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ km² (၁၉၈,၁၁၅ sq mi စတုရန်း မိုင်) (အဆင့်: ၄၉)
၆၇,၉၅၉,၀၀ (အဆင့် - ၂၀)
၁၂၂/km² စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၁၇/sq mi စတန်းုရန်း မိုင်) (အဆင့် - ၈၅)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၁၀၈ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၃၄)
$၃,၄၀၀ (အဆင့် - ၉၂)
မြင့် · ၇၈
ဘတ် (THB "฿")
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘုရင်မင်းဆက်အား မဟာဝဇိရာလင်္ကရဏဘုရင်မှ ဦးဆောင် အုပ်ချုပ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ရာမ ၁၀ သို့မဟုတ် ချက်ကရီမင်းဆက်၏ ဒသမမြောက် ဘုရင် အဖြစ် အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်မှ စတင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁၉၈,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၅၁၃,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၅၁ ခုမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၂၀ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၆၆ သန်း ရှိသည်။ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့မှာ ဘန်ကောက်မြို့ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အချက်အခြာ ဌာန တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၇၅-၉၅% အထိမှာ ထိုင်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး အဓိက ဒေသအလိုက် လူမျိုးအုပ်စုကြီး ၄ မျိုးရှိပြီး အလယ်ပိုင်းထိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ထိုင်း (ခေါင်(လောင်)အီစန်)၊ မြောက်ပိုင်းထိုင်း (ခေါင်မောင်း) နှင့် တောင်ပိုင်းထိုင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်သွေး သိသာစွာ ပါရှိသော တရုတ်ထိုင်းလူမျိုးမှာ လူဦးရေ၏ ၁၄% ရှိပြီး တရုတ်သွေး အနည်းငယ် ပါဝင်သော ထိုင်းလူမျိုးမှာ လူဦးရေ၏ ၄၀% အထိ ရှိသည်။ ထိုင်းမလေး လူမျိုးမှာ လူဦးရေ၏ ၃% ရှိပြီး ကျန်ရှိသောသူများမှာ မွန်၊ ခမာ နှင့် အမျိုးမျိုးသော တောင်ကုန်းနေလူမျိုးစုများ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ ထိုင်းဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး အဓိက ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်၍ လူဦးရေ၏ ၉၅% ခန့်မျှ ကိုးကွယ်ကြသည်။
၁.၂ သယာမ် ဆိုသော အမည်
ဤအမည်သည် မြန်မာဘာသာ သျှမ်းနှင့်တူညီသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်တွင် သျှမ်နှင့် အနွယ်တူ လူမျိုးများစွာရှိကြပြီး ထိုသူတို့က သူတို့ဘာသာအရ တိုင်ဟုခေါ်ကြပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့က ရှမ်းဟုခေါ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ မြန်မာတို့ကိုလည်း မန့်ဟု ခေါ်ကြသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျပန်အင်ပိုင်ယာမှ ၎င်းတို့၏ တပ်များကို ထိုင်းနိုင်ငံအား ဖြတ်၍ မလေးရှား စစ်မျက်နှာသို့ ရွေ့လျားခွင့် ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့၏ ကျူးကျော်မှုသည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်၌ အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှ တလွှား တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အချိန်ကိုက်၍ စတင်ခဲ့ပြီး တော်ဝင်ထိုင်း ကြည်းတပ်မတော် နှင့် ၆ နာရီ မှ ၈ နာရီကြား တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်မှာ ပလာယက် ဖီဘွန်ဆောင်ခရမ်မှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရန် အမိန့်ပေးသည့် အချိန်အထိ ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဂျပန်အား လွတ်လပ်စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ဂျပန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မဟာမိတ် စာချုပ်ကို လျို့ဝှက် ချုပ်ဆိုခဲ့ကာ ထိုစာချုပ်အရ တိုကျိုမှ ဗြိတိသျှနှင့် ပြင်သစ်တို့သို့ ထိုင်းမှ ဆုံးရှုံးခဲ့သော နယ်မြေများကို ပြန်လည်ရယူရန် အတွက် အကူအညီပေးမည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သည်။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထိုင်းမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့အား ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် စစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ဂျပန်တို့အား မဟာမိတ်တို့နှင့် တိုက်ခိုက်သော စစ်ပွဲတွင် ကူညီတိုက်ခိုက်ရန် ကတိပြုခဲ့ကာ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဂျပန်ကို တော်လှန်ရန် ထိုင်းလွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အာရှ အလုပ်သမား ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် နှင့် မဟာမိတ် စစ်သုံးပန့် ၆၀,၀၀၀ ကျော်တို့သည် သေမင်းတမန် ရထားလမ်းဟု အများသိရှိကြသော ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်၏ အချိန် အတော်များများတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအား ဝန်ကြီးချုပ် ပရမ် တင်ဆူလန်နွန်ဒါမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ ဖြစ်သဖြင့် ပါလီမန် နိုင်ငံရေးကို ပြန်လည် အသက်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ၁၉၉၁ မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ခဏတာ စစ်တပ် အုပ်ချုပ်မှုမှလွဲ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အဖြစ် ရှိခဲ့သည်။ လူအများ၏ အကြိုက်ကို လိုက်သော ဝန်ကြီးချုပ် သက်ဆင် ရှင်နာဝပ် ဦးဆောင်သော ထိုင်းရပ်ထိုင်း ပါတီသည် ၂၀၀၁ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ထိုင်းရပ်ထိုင်း ပါတီအား ခြစားသည်ဟု စွပ်စွဲ၍ လူအမြောက်အများ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး စစ်တပ်မှ စက်တင်ဘာလတွင် အာဏာ သိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲမှ အရပ်သား အစိုးရ သို့ အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ မေလတွင် အခြား စစ်အာဏာသိမ်းမှု တစ်ခုဖြင့် စစ်တပ် လက်အောက်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလမှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံအား ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အမျိုးသား ကောင်စီ အမည်ရသော စစ်အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ တစိတ်တဒေသကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကာ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ညမထွက်ရ အမိန့် ကြေငြာခြင်း၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လူစုလူဝေး ပြုလုပ်ခြင်းများအား တားမြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သူများအား ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အင်တာနက် ဆင်ဆာ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် မီဒီယာများကို ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာနှင့်သာမက ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် အပြည့်ပါအဝ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်သော အဓိက မဟာမိတ် နှင့် အထူး ၃၀၁ အစီရင်ခံစာ ပါ ဦးစားပေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံရသူ စာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်လျက်ရှိသည်။ အခြားအာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ ဘရူနိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ နှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးနီးကပ်စွာရှိပြီး ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများသည် နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ တိုးတက်လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယခင် လက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သော ဒေါက်တာ ဆူပါချိုင်း ပနစ်ပက်ဒိုင်သည် ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ညီလာခံ အဖွဲ့တွင် လက်ရှိ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အရှေ့အာရှ နိုင်ငံများအစည်းအဝေး သို့ စတင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သက်ဆင်မှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို ဆက်လက်မရယူတော့ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး အလှူရှင်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မဟာမဲခေါင်ဒေသအတွင်းရှိ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ သက်ဆင်သည် ထိုင်းအား ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လောနိုင်ငံကဲ့သို့ ဆင်းရဲသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို စတင် အကောင်အထည် ပေါ်ခဲ့သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး ကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာရှင်တို့နှင့် ပိုမိုရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
အဘီဆစ်မှာ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ကာဆစ်ပီယွန်အား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် နယ်စပ်အနီးရှိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ သက်တမ်းရှိသော ပရယ်ဗီဟီးယား ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းပျက်ကြီး၏ အနီးတွင် ထိုင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတပ်ဖွဲ့များ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရမှ ၎င်းတို့ဘက်မှ ထိုင်းစစ်သား ၄ ဦးကို သတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀ ဦးကို ဖမ်းမိနိုင်ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ထိုင်းအစိုးရမှ ထိုင်းစစ်သား အသေအပျောက် ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား စစ်သား ၂ ဦး နှင့် ထိုင်းစစ်သား ၃ ဦးတို့ သေဆုံးခဲံရသည်။ စစ်တပ်နှစ်ခုစလုံးမှ အခြားတစ်ဖက်မှ အရင်ပစ်ခတ်သည်ဟု အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဖက် ပိုင်နက် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ထိုင်းတပ်မတော်နေ့ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြီး အယုဓျာတိုင်းပြည်ရှိ နရဆင် ဘုရင်မှ တောင်ငူမင်းသား အား ၁၅၉၃တွင် အောင်ပွဲရသည့် နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။
ကျောက်ဖယားမြစ်နှင့် မဲခေါင်မြစ်တို့သည် ထိုင်းကျေးလက်ဒေသအတွက် အဖိုးမဖြစ်နိုင်သော ရေကြောင်းလမ်း ဖြစ်သည်။ သီးနှံများအား စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ထိုမြစ်နှစ်ခု နှင့် ၎င်းတို့၏ မြစ်လက်တက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာ ၁၂၄,၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၃၂၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) မျှ ကျယ်ဝန်းပြီး ကျောက်ဖယားမြစ်၊ မဲကလောင်မြစ်၊ ဘန်ပကောင်းမြစ် နှင့် တာပီမြစ်တို့ စီးဝင်လျှက် ရှိသည်။ တောင်ပိုင်းဒေသ နှင့် ကရားကုန်းမြေကျဉ်း ဒေသတို့တွင် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ကြည်၍ တိမ်သော ရေ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အထောက်အကူ ပြုသည်။ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဗဟိုဌာနဖြစ်ပြီး ဆတာဟစ်တွင် နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ရှိကာ လမ်ချဘန်တွင် အလုပ်အများဆုံး ကုန်သွယ်ရေး ဆိပ်ကမ်း ရှိသည်။
တောကောင်များအား အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အဖြစ် မွေးမြူကြသည့် အလေ့အထကြောင့် အချို့သော မျိုးစိတ်များအား ခြိမ်းခြောက်လျှက် ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန် အကောင်ပေါက်ကလေးများအား ဖမ်းဆီးရောင်းချခြင်း အတွက် ၎င်းတို့၏ မိခင်အား သတ်ဖြတ်ရန် မကြာခဏဆိုသလိုပင် လိုအပ်လေ့ ရှိသည်။ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရပြီး ၎င်းတို့၏ သဘာဝ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကွာဝေးသွားသည့် အခါတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် တောကောင်များသည် သေဆုံးခြင်း နှင့် ဆက်လက်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ ရှိကြသည်။ ထိုဒဏ်ကို ခံရသော သတ္တဝါများမှာ ဟိမဝန္တာ ဝက်ဝံ၊ ပသျှူးဝက်ဝံ၊ လားမျောက်လွှဲကျော် နှင့် မျောက်လွှဲကျော်ကြား နှင့် ဘင်တူယောင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ 
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သတင်းအချက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်း ၂၇,၂၃၁ ကျောင်းတွင် စာသင်ခန်းအတွင်း၌ အလွန် လျင်မြန်သော အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ရမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ဘီတီအက်စ် ကောင်းကင်ရထားသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သော ဆသွန် ကို ဖြတ်သန်းသွားစဉ်။ ဘန်ကောက်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အချက်အခြာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ပို့ကုန်အပေါ်တွင် များစွာ မူတည်နေပြီး ပို့ကုန်များသည် စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ ၃ပုံ၂ပုံမျှ ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅ ဘီလီယံမျှ တန်ဖိုးရှိသော ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့ရောင်းချလျှက် ရှိသည်။ အဓိကပို့ကုန်များတွင် ဆန်၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဖိနပ်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းများ၊ ရာဘာ၊ ကျောက်မျက်ရတနား၊ မော်တော်ကား၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် လျှပ်စစ် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
ဝပ်ဖရာကောင်းဘုရားရှိ ဒဏ္ဍာရီလာ ကိန္နရာ ရုပ်ထု
ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား အာဏာပိုင် အဖွဲ့က "အံဩဖွယ်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ" ဟူသော ကြွေးကြော်သံကို အသုံးပြု၍ ထိုင်းနိုင်ငံအား နိုင်ငံတကာတွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် "ထိုင်းဆန်မှုကို ရှာဖွေပါ" ဟူသော ကမ်ပိန်းဖြင့် ထပ်မံအားဖြည့် ခဲ့သည်။
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေး၏ တရားဝင် မကြေငြာသော်လည်း လူအများသိကြသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအား ပြည်ပရှိ အထူးအဆန်း အနေနှင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများအား ဆွဲဆောင်သည့် ကမ်ပိန်းလည်း ရှိခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး ငွေကြေးဖြင့် မြူဆွယ်မှုများ ရှိလာသည့် အခါတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း နှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ခန့်မှန်းမှု တစ်ခု အရ နှစ်စဉ် ထိုလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယံ အထိ သို့မဟုတ် ထိုင်း စီးပွားရေး၏ ၃% အထိ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း ထားသည်။  ချူလာလောင်ကောင်း တက္ကသိုလ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားမဝင် စီးပွားရေး အပေါ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသန တစ်ခု အရ ၁၉၉၃ မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အတွင်း ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဂျီဒီပီ၏ ၂.၇% ခန့် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတို့၏ သုံးစွဲငွေ အနည်းဆုံး ၁၀% သည် လိင်မှုဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းအလုပ်သမားထု၏ ၄၉% သည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားထု၏ ၄၉% သည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြသည်။  ၁၉၈၀ ခုနှစ်က ၇၀% မျှ လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ယခု လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အရေးပါသော သီးနှံဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ကာ လတ်တလောတွင်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့ နောက်သို့ ရောက်ခဲ့သည်။  ထိုင်းနိုင်ငံသည် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ အတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေ အများဆုံး ရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၇.၂၅% ရှိသည်။  စိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေများထဲမှ ၅၅ % ကို ဆန်စိုက်ပျိုးရန် အတွက် အသုံးချထားသည်။ 
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍသည် လုပ်အားကို အဓိက အသုံးချသော အလုပ် အဖြစ်မှ စက်မှုအားကို အသုံးချပြီး ပိုမို၍ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သော ကဏ္ဍ အဖြစ် ပြောင်းလဲလျှက် ရှိသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍသည် တစ်နှစ်လျှင် ၄.၁% တိုးတက်လျှက်ရှိပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကြားတွင် ၂.၂% မျှ ဆက်လက်တိုးတက်လျှက် ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမှ ဂျီဒီပီတွင် ပါဝင်မှုနှုန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိပြီး ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့ရောင်းချခြင်းမှာ မြင့်တက်လျှက် ရှိသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်မှုသည် တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး ခရိုင်များဖြစ်ကြသော ပဌာနီ၊ ယဲလာ၊ ဆတုံး၊ နရာထီဝပ်ခရိုင်တို့တွင် စုစည်းနေကြပြီး ဆုံခလ နှင့် ချွန်ပွန်းခရိုင်တို့တွင် တစိတ်တဒေသ တွေ့ရှိရသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူများမှာ လူဦးရေ၏ ၀.၉% မျှ ရှိပြီး ကျန်ရှိနေသောသူများမှာ ဆစ်ခ်ဘာသာ နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာတို့ကို ကိုးကွယ်ကြကာ မြို့ကြီးများတွင် အများဆုံး တွေ့ရသည်။ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသော်လည်း သမိုင်းကြောင်းအရ အရေးပါသော ရဟူဒီဘာသာ ကိုးကွယ်သူများလည်း ရှိပြီး ၁၇ ရာစုကတည်းက တည်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုများအပေါ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်နိုင်ငံ မှ ယဉ်ကျေးမှုများ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းများ အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ရှိသည်။ ထိုင်းတို့၏ ရိုးရာတွင် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် အခြား အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတို့မှ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော် ဘာသာမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် ထိုင်းအမျိုးသားရေး လက္ခဏာ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာသည် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်စွာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် အန်နီမစ်ဆင် တို့မှ ဆင်းသက်လာသော ယုံကြည်မှုများ ပါဝင်နေသကဲ့သို့ ဘိုးဘေးဘီဘင် ရှိခိုးမှု လည်း ပါဝင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြက္ခဒိန်မှာ ဗုဒ္ဓပြက္ခဒိန်၏ အရှေ့တိုင်း ဗားရှင်းကို အခြေခံပြီး ဂျော်ဂျီယံ ပြက္ခဒိန်ထက် ၅၄၃ နှစ်မျှ စောသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်သည် ထိုင်းပြက္ခဒိန်တွင် ၂၅၅၈ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသော လူမျိုးစုများစွာတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုလူမျိုးစုထဲမှ အချို့မှာ မြန်မာ၊ လော၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် မလေးရှားတို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီး ရိုးရာ ဒေသခံ ယဉ်ကျေးမှု၊ ထိုင်းအမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးခြင်းများကြားတွင် ညှိနှိုင်းနေထိုင်လျှက် ရှိကြသည်။ နိုင်ငံပြင်ပရောက် တရုတ်များမှာလည်း ထိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့တွင်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့ အနေနှင့် ထိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တို့တွင် နေရာယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းတရုတ်လူမျိုးတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် မိသားစုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဆက်အနွယ်များ တူညီကြသော ဝါးကွန်ယက် ဟု ခေါ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံပြင်ပရောက် တရုတ်တို့၏ စီးပွားရေး ကွန်ယက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ကြီးပွားတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ရာဇမင်္ဂလ အားကစားရုံသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော အားကစားကွင်း ဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ် ၆၅,၀၀၀ ဦး ဝင်ဆံ့သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ ဘန်ကာပိ တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုင်းအမျိုးသားဘောလုံးအသင်း၏ အိမ်ကွင်း ဖြစ်သည်။
↑ World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables။ United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division။ 10 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thailand။ International Monetary Fund။ 16 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Theraphan Luangthongkum (2007). "The Position of Non-Thai Languages in Thailand". ISEAS Publishing.
↑ Jonathan H. Ping Middle Power Statecraft (p 104)
↑ Thailand. History. Encyclopædia Britannica
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Some Aspects of Asian History and Culture by Upendra Thakur p.157
↑ "Science news: What happened at Angkor Wat". The Washington Post. 13 April 2010.
↑ Slave-owning societies. Encyclopædia Britannica.
↑ "King, country and the coup"၊ The Indian Express၊ 22 September 2006။3November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Werner Gruhl, Imperial Japan's World War Two, 1931–1945, Transaction Publishers, 2007 ISBN 978-0-7658-0352-8
↑ Thailand's juristocracy - New Mandala
↑ "A list of previous coups in Thailand"၊ 19 September 2006။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FTA Watch Group website။ Ftawatch.org။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John D. Ciorciari (10 March 2004)။ Thaksin's Chance for Leading Role in the Region။ The Straits Times။
↑ Thailand sends troops to bolster US occupation of Iraq။ 28 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Telegraph, Troops from Thailand and Cambodia fight on border,3April 2009
↑ Bloomberg, Thai, Cambodian Border Fighting Stops, Thailand Says,3April 2009
↑ Thailand Military Strength။ 15 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John Pike (27 April 2005)။ Ministry of Defense။ GlobalSecurity.org။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၆.၀၀ ၃၆.၀၁ ၃၆.၀၂ ၃၆.၀၃ ၃၆.၀၄ ၃၆.၀၅ ၃၆.၀၆ ၃၆.၀၇ ၃၆.၀၈ ၃၆.၀၉ ၃၆.၁၀ ၃၆.၁၁ ၃၆.၁၂ ၃၆.၁၃ ၃၆.၁၄ ၃၆.၁၅ ၃၆.၁၆ ၃၆.၁၇ ၃၆.၁၈ ၃၆.၁၉ ၃၆.၂၀ The Climate of Thailand။ Thai Meteorological Department။ 18 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr. Susan L. Woodward (1997–2014)။ Tropical Savannas။ Biomes of the World။ S. L. Woodward။ 23 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ Thailand's Elephants။3March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jennifer Hile (6 October 2002)။ Activists Denounce Thailand's Elephant "Crushing" Ritual။ National Geographic Today။7June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thai Forests: Dept. National Parks, Wildlife & Plants။ Thai Society for the Conservation of Wild Animals။
↑ Thai university applicants scored an average 28.34% in English in recent university entrance exams.Inarecent IMD World Competitiveness Report, Thailand was ranked 54th out of 56 countries globally for English proficiency, the second-lowest in Asia. Singapore was third, Malaysia 28th, and Korea 46th: The Sorry State of Thai Education – Part 4: Dismal English-language education, Reuters & The Korea Herald, 23 March 2012.
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ Draper၊ John (2012)၊ "Revisiting English in Thailand"၊ Asian EFL Journal၊ Asian EFL Journal၊ 14 (4): 9–38၊ ISSN 1738-1460
↑ OECD (2013)၊ Structural Policy Country Notes: Thailand (PDF)၊ OECD
↑ "Thai students drop in world maths and science study"၊ The Nation၊ 12 December 2012။
↑ "Solving Isaan's education problem"၊ The Isaan Record၊ 12 December 2011။
↑ "PISA Thailand regional breakdown shows inequalities between Bangkok and Upper North with the rest of Thailand"၊ The Isaan Record၊ 21 February 2014။
↑ "Thailand’s Massive Internet Censorship", Asian Correspondent.com, Hybrid News Limited, 22 July 2010
↑ GDP (Purchasing Power Parity)။ US CIA။4January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "NESDB: Thailand facing unemployment problem"၊ Pattaya Mail၊ 25 November 2014။4January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Phisanu Phromchanya (24 February 2012)။ Thailand Economy To Rebound Strongly In 2012,။ The Wall Street Journal။ 26 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၁.၀ ၆၁.၁ Production Statistics။ OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)။6November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၂.၀ ၆၂.၁ "Thailand's love affair with the pickup truck"၊ Nikkei Asian Review၊ 27 November 2014။4January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pasuk Phongpaichit Thailand's illegal economy and public policy. Seminar paper delivered at the Centre of Southeast Asian Studies, Kyoto University, Nov 1999
↑ Paradise Revealed။ 29 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၄.၀ ၇၄.၁ ၇၄.၂ ၇၄.၃ Henri Leturque and Steve Wiggins 2010. Thailand's progress in agriculture: Transition and sustained productivity growth. London: Overseas Development Institute
↑ International Grains Council. "Grain Market Report (GMR444)", London, 14 May 2014. Retrieved 13 June 2014.
↑ CIA World Factbook – Greater Mekong Subregion။ Cia.gov။3November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၈.၀ ၇၈.၁ International Index of Energy Security Risk။ Institute for 21st Century Energy (2013)။ 14 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၉.၀ ၇၉.၁ Ethnolinguistic Maps of Thailand (PDF) (Thaiဘာသာစကားဖြင့်)။ Office of the National Culture Commission။ 2004။ 8 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: unrecognized language (link)
↑ World Bank Group. (n.d.). Population, total [Thailand]. Washington, DC: Author. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TH
↑ ၈၁.၀ ၈၁.၁ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Reports submitted by States parties under article9of the Convention: Thailand (PDF) (English with appended Thai government translationဘာသာစကားဖြင့်)။ United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination။ 28 July 2011။9October 2016 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: unrecognized language (link)
↑ "Hard lessons in expat paradise"၊ BBC News၊ 14 December 2006။ 1 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၅.၀ ၈၅.၁ US Department of State, Thailand။ State.gov။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Murray L Weidenbaum (1 January 1996)။ The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs are CreatingaNew Economic Superpower in Asia။ Martin Kessler Books, Free Press။ pp. 4–8။ ISBN 978-0-684-82289-1။
↑ Weights and measures in Thailand။ Cockatoo.com (17 December 1923)။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hodgson၊ Guy။ "Snooker: A storm coming in from the East: Thailand doesn't boast many world-beating sportsmen. But over the next fortnight James Wattana might just become one"၊ 18 April 1993။ 25 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ South East Asians proving high earners on the tables (11 January 2014)။ 25 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Golf in Thailand by။ Golfasia.com။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chawadee Nualkhair။ "Thailand woos foreign golfers with sun, sand traps"၊ 10 July 2009။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thailand Basketball။ best-basketball-tips.com။2June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "End of an era for Muay Thai at Lumpini"၊6February 2014။6February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းနိုင်ငံ&oldid=648537" မှ ရယူရန်
၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။